Amandla e-Hydraulic: ukusebenza, izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IsiJamani sasePortillo | | amandla ombane
Namhlanje siza kuthetha ngamandla ahlaziyekayo aphakathi kwezona zisetyenzisiweyo. Imalunga ne amandla hydraulic. Luhlobo lo amandla acocekileyo Iyakwazi ukuguqula amandla omxhuzulane anokuba nomzimba wamanzi kumandla ombane. Apha siza kuchaza inyathelo ngenyathelo ukuba la mandla aveliswa njani kwaye yintoni eyenziwayo ukuze uwasebenzise.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge-hydropower? Kufuneka uqhubeke ufunda 🙂
1 Yintoni amandla ombane?
2 Usebenza njani?
3 Izityalo ezikhupha amanzi
4 Isitya sehydroelectric
5 Isikhululo samandla ombane
6 Imbali yamandla ombane
Yintoni amandla ombane?
Masiqale ngokubonisa kwakhona ukuba kunjalo Umthombo onokuhlaziywa kwaye ucoceke ngokupheleleyo. Ngombulelo kuwo, umbane unokuveliswa ngaphandle kokungcolisa okanye ukuphelisa izixhobo zendalo. La mandla azama ukuguqula amandla omxhuzulane anawo umzimba wamanzi ekuphakamiseni ngamandla e-kinetic ukoyisa umahluko kubude. Amandla oomatshini afunyenweyo anokusetyenziselwa ngokuthe ngqo ukuhambisa ishafti yenjini ukuze ivelise amandla ombane.
Olu hlobo lwamandla luhlambuluke ngokupheleleyo kuba luvela emilanjeni nasemachibini. Ukudalwa kwamadama kunye neekhondomu ezinyanzelekileyo kukonyuse kakhulu ukubakho kunye namandla okuphehlwa kwamandla. Kungenxa yokuba Inokugcina amanzi amaninzi kwaye iwasebenzise ukwenza amandla.
Kukho iintlobo ezininzi zezityalo zamandla ombane. Eyokuqala ifumaneka kwimimandla esezintabeni. Ukuthatha ithuba lokuphakama bajolise ekwenzeni ukutsiba ukuya kwiindawo eziphakamileyo zokuwa. Olunye uhlobo lwesityalo ngamanzi alulwelo kwaye ziyasetyenziswa imizimba emikhulu yamanzi omlambo oyisa umohluko omncinci kubude. Kunokuthiwa enye ivelisa amandla amaninzi ngexesha elifutshane kwaye okwesibini ivelisa kancinci kancinci.
Amanzi echibini okanye isitya esenziwe ngumntu ahanjiswa ezantsi ngemibhobho. Ngale ndlela kunokwenzeka ukuba kuguqulwe amandla ayo abe ngoxinzelelo kunye Amandla eKinetic enkosi kumhambisi kunye neinjini.
Amandla oomatshini aguqulwa ngombane wombane ngenxa yesiqhelo sokungeniswa kombane wombane. Yile ndlela ufumana umbane. Izikhululo zokumpompa amanzi zisekiwe ukugcina amandla kwaye ke ziyafumaneka ngexesha lokufuna okukhulu. Njengoko kunokwenzeka ukuhlalutya, iinkqubo zokugcina yamandla ahlaziyekayo ngumda kwinkqubela phambili yawo.
Izityalo ezikhupha amanzi
Kwizityalo zombane ophefumlelweyo, amanzi afakwa kwiitanki ezinyukayo kusetyenziswa amandla aveliswayo nangenakufuneka ngobusuku obunye. Ngale ndlela, emini xa umbane mkhulu, ukongezwa kwemizimba yamanzi. Iinkqubo zokumpompa zinethuba lokuba zivumela amandla ukuba agcinwe kumaxesha athile okufumaneka ukuze asetyenziswe ngexesha lesidingo.
Ngaphandle kwento yokuba inezibonelelo ezininzi ukuba ngamandla angangcolisiyo, ulwakhiwo lwamadama kunye nezitya ezinkulu zibangela ifuthe kwindalo esingqongileyo. Akusekho nje ukwakhiwa kwamadama, ukuba ayingawo amadama okwenziwa, ukukhukula komhlaba omkhulu, njl. Bonakalisa imeko yendalo.
Isetyenziselwa ukuqokelela amanzi omlambo. Sisitya sokufakelwa esisebenza ukugcina amanzi. Eyona nto iphambili kuyo yidama. Ngombulelo edamini, ukuphakama okuyimfuneko kuyafezekiswa ukuze amanzi asetyenziswe kamva ngenxa yomahluko kwinqanaba.
Ukusuka kwisitya sokuya kumbane apho kukho iijenreyitha kukho umjelo onyanzelekileyo. Umsebenzi wayo kukuxhasa isantya sokuphuma kwee-turbine blade. Ukuvulwa kokuqala kubanzi kwaye indawo yokuphuma iyancipha ukwandisa amandla aphuma kuwo amanzi.
Isikhululo samandla ombane
Isityalo samandla sesinye sinothotho lwemisebenzi yobunjineli be-hydraulic ebekwe ngokulandelelana okuthile. Oomatshini banenjongo yokulungiselela ukufumana imveliso yombane kumandla ombane. Amanzi athuthelwa kwiinjini enye okanye ezingaphezulu ezijikeleza umbulelo kuxinzelelo lwamanzi. Iturbine nganye idityaniswe nenye into inoxanduva lokuguqula ukujikeleza kweentshukumo kumandla ombane.
Enye yeengxaki ngaphandle kwempembelelo yokusingqongileyo eveliswe kukudalwa kwedama kukuba ukuveliswa kwamandla akuhlali kunjalo. Kufuneka kukhunjulwe ukuba ukuveliswa kwamandla ahlaziyiweyo kuxhomekeke ngqo kwindalo. Ke ngoko, unikezelo lwamanzi kwisitya samanzi esenziwe ngumntu luya kuxhomekeka, yolawulo emilanjeni. Ukuba imvula kwindawo ingaphantsi, ukuveliswa kwamandla akuyi kusebenza kakuhle.
Into eqhele ukwenziwa kwamanye amazwe kukumpompa amanzi kumadama aphehla umbane ebusuku. Oku kwenziwa kuba kukho intsalela yamandla kwaye amandla e-hydraulic agcinwe emini ayasetyenziswa kwakhona. Xa imfuno yombane iphezulu, linjalo nexabiso. Ke ufumana inzuzo yomnatha kwaye ugcine amandla ombane.
Imbali yamandla ombane
Abokuqala ukusebenzisa olu hlobo lwamandla baba amaGrike kunye namaRoma. Ekuqaleni basebenzise amandla ahlaziyiweyo kuphela ukuqhuba amatye okusila amanzi okusila umbona. Njengoko ixesha lihamba, iifektri zavela kwaye iivili zamanzi zaqala ukusebenzisa amandla anokubakho anamanzi.
Ekupheleni kwamaXesha Aphakathi ezinye iindlela zazisetyenziselwa ukuxhaphaza amandla e-hydraulic. Imalunga namavili hydraulic. Zasetyenziselwa ukunkcenkceshela amasimi kunye nokufumana kwakhona iindawo ezinomgxobhozo. Ivili lamanzi lisasetyenziswa nanamhlanje kwimizi-mveliso nakwimveliso yombane.
Malunga noHlaziyo lwesiBini lweMizi-mveliso ivili lamanzi lavela kwiinjini yamanzi. Ngumatshini owakhiwe usebenzisa ivili le-castor kwi-asi. Ngobuchwephesha bobuchwephesha buye bagqibelela kwaye basebenza.
Iinjini ephuculweyo ekusebenzeni kokuguqulwa kwamandla anokubakho emanzini abe ngamandla ajikelezayo e-kinetic kwaye asetyenziswe kwishafti.
Ndiyathemba ukuba ngale ngcaciso ukwazile ukufunda okuthile ngakumbi malunga namandla ahlaziyekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » amandla ombane » Amandla e-Hydraulic
Iinkqubo zokugcina amandla